अर्जेन्टिनाको पराजयपछि नेपाली समर्थकको प्रतिक्रिया, के भन्छन् मेस्सीलाई? | Suvadin !
अर्जेन्टिनाको पराजयपछि नेपाली समर्थकको प्रतिक्रिया, के भन्छन् मेस्सीलाई?
विश्वकपमा २ वटा खेल खेलमै अर्जेन्टिनाले खराब नतिजा दिएपछि समर्थकहरू रूष्ट भएका हुन्। पहिलो खेल बराबरी नै खेले पनि दोस्रो खेल लज्जास्पद रूपले पराजित हुन पुग्यो। समूह चरणको एक खेल अझै बाँकी रहेपनि अर्जेन्टिनाको घर फर्किने संकेत प्रष्टै देखिन्छ। अर्जेन्टिनाको समूह चरणमा बाहिरिने संकेतसँगै स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको धेरै अालोचना भइरहेको छ। यद्यपि, टिममा अरू खेलाडीको बराबरी दोष भएपनि सबै मेस्सीमा थुपारिएको छ।
Jun 22, 2018 18:26
Shared: 29 times | Share this on
काठमाडाैं, ८ असार – विश्वकप फुटबलको उपाधिकै दाबेदार टोली अर्जेन्टिनाले अाशाअनुसारको प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेपाली समर्थकहरू पनि रूष्ट भएका छन्। विभिन्न कोणबाट अर्जेन्टिनाको अालोचना भइरहेको छ।
विश्वकपमा २ वटा खेल खेलमै अर्जेन्टिनाले खराब नतिजा दिएपछि समर्थकहरू रूष्ट भएका हुन्। पहिलो खेल बराबरी नै खेले पनि दोस्रो खेल लज्जास्पद रूपले पराजित हुन पुग्यो। समूह चरणको एक खेल अझै बाँकी रहेपनि अर्जेन्टिनाको घर फर्किने संकेत प्रष्टै देखिन्छ।
अर्जेन्टिनाको समूह चरणमा बाहिरिने संकेतसँगै स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको धेरै अालोचना भइरहेको छ। यद्यपि, टिममा अरू खेलाडीको बराबरी दोष भएपनि सबै मेस्सीमा थुपारिएको छ।
अर्जेन्टिनाका कति समर्थकहरूले अर्जेन्टिनाको दोश्रो खेल पश्चात समर्थन नगर्ने निर्णय लिएर जर्सी थन्काए। कति समर्थकहरू अझै जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मेस्सीकै समर्थन गर्ने बताउँछन्।
अर्जेन्टिनाका समर्थक खेलपछि पनि मेस्सीलार्इ स्टारकै रूपमा हेर्ने गर्छन्। र, खराब प्रदर्शनको जिम्मेवार मेस्सी मात्र नरहेको बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, 'खेलमा हारजीत स्वाभाविक हो। त्यसैले मेस्सी सदावहार स्टार हुन्। यो खेलको भरमा उनलार्इ अालोचना गर्नु उचित हुँदैन।'
यसै क्रममा शुभदिनले हिजोको खेलपश्चात केही अर्जेन्टिना समर्थकहरूको फेसबुकका स्ट्याटसलार्इ समेटेको छ।
के भन्छन् समर्थक?
अर्जेन्टिना समर्थक युवा पत्रकार राजु अधिकारी लेख्छन्, 'असल मान्छे त्यो हो जसले पीडामा रहेकालाई त्यसबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्छ। घाउमा नुनचुक छर्ने काम मानवीय हैन।'
होमनाथ पाैडेल लेख्छन्, 'मेस्सीको खेलमा दोश छैन। मेस्सी महान् खेलाडी हुन्। तर, टीम वर्कको तालमेल मिलेन देश हारेको हो। मान्छे हारेको हैन।'
अशेष कोइरालाले लेखेका छन्, 'तीन गोल मात्र होइन, भुरा–भुरी हो ६ गोल खाअोस्। तरपनि मेस्सी दाजु र अर्जेन्टिनाको सपोर्ट गर्न छाडिन्न। जय अर्जेन्टिना!'
विशाल श्रेष्ठले लेखेका छन् –
जिते पनि मातिन्दैन
हारे पनि च्यातिन्दैन (जर्सी)
खेल हो यो शानको
जे भएनि आतिन्दैन।
अस्ती ड्र, हिजो हारे
खेल–खेलमा आँशु झारे।
जीतको लागि ब्याकुल हामी
मेस्सीको छैन सानी।
दामनमा मृत्यु भएका ८ जना भारतीय पर्यटकको पहिचान
भारतबाट दामन घुम्न आएका ८ पर्यटकको मृत्यु